Isicelo izivumelwano yokunivumela kunomthelela ngcono ukukhanga ukutshalwa kwezimali umnotfo wasekhaya, ikhwalithi yamasevisi, imisebenzi kanye nemikhiqizo. Njengengxenye izivumelwano ezenziwe ekusetshenzisweni ngokugcwele izinsiza.
Ingqikithi yalo sivumelwano yokunivumela
Ngaphansi idili, elinye iqembu luthembisa ukwenza lokhu kutsha kumbe ukwakha isakhiwo, ubunikazi elingelakwaJuda noma ngeke ube ngowenye ndaba. Isivumelwano nerhasi maqondana into impahla kamasipala ukuthi umsebenzisi uyosingatha imisebenzi ehlobene ukuxhashazwa impahla. Kulokhu, umnikazi ubophekile ukuba uthumele ilungelo lokusebenzisa nefa isikhathi esithile amaqembu. Isivumelwano yesabelo somhlaba e maqondana into kamasipala iqukethe izinto izinkontileka ahlukahlukene. Ngakho, imithetho esebenzayo the Civil Code on izivumelwano, izingxenye abakhona kule dokhumenti, uma omunye akuveli nokuqukethwe kwalo noma ngokomthetho.
umsebenzi wokwakha kabusha
I concessionaire ngaphansi kwesivumelwano yokunivumela, eqala isibopho ukuze bafeze imisebenzi ethile. Zingase okuhloswe ngazo ekudaleni kabusha ingcebo. Ngokwesibonelo, isivumelwano ingase ihlanganise imisebenzi efana:
Kuhlelwa Kabusha ngokusebenzisa ukwethulwa ubuchwepheshe obusha.
Automation kanye nokukhanda zokukhiqiza.
Yesimanje futhi esikhundleni zokukhandleka kwemishini.
Izinguquko ezakhiweni obusebenzayo noma ukucutshungulwa into noma izingxenye zalo ngabanye.
Okunye imisebenzi ukuthi ukuthuthukisa ukusebenza kwe-ezimpahleni ezingasuki phansi.
Into yesivumelwano, okuyinto kuncike kabusha, ngesikhathi kuthengiselana ukuba ubunikazi futhi mahhala kusuka amalungelo abanye. Akuvunyelwe no afunge noma ahlukaniswe umsebenzisi uthethe amafa eziphathekayo. Guqula kwenjongo asivunyelwe into. Umsebenzisi kungaba ukubuyisa imali futhi ukukhiqiza imikhiqizo izitshalo kanye nezimpahla. Ziyakwazi impahla yakhe, ngaphandle uma ezisungulwe ngenye e inkontileka. Ingozi umonakalo ngephutha noma ukubhujiswa kwezimali ezimpahleni ezingasuki phansi, yoba concessionaire, ngaphandle uma echaziwe ngenye esivumelwaneni. Incwadi yesivumelwano ingase yabelwe duty ukuthathelwa umshuwalense ngomnotho ngezindleko zakhe siqu.
Isivumelwano yesabelo somhlaba e maqondana into kamasipala kungabanga ukudluliswa nokusetshenziswa kwempahla eziphathekayo, akha iyunithi nge iyindlela eyinhloko noma ukuba eziqhutshwa Umbuso indawo ye ngokuziphatha amaqembu ukuba imisebenzi yokuhweba bavumelana. Kulokhu, bavumelana ukufaka Ukwakheka kwabo kanye nencazelo, isikhathi kanye injongo yokusetshenziswa. Isivumelwano futhi ebekiwe inqubo bebuyela umnikazi at ukuqedwa kwesivumelwano. Njengengxenye kuthengiselana kungenziwa esisungulwe izibopho ezengeziwe umsebenzisi. Bazimisele kwesivumelwano mutual amaqembu lapho benza isivumelwano yokunivumela. Izibonelo leyo mithwalo yemfanelo: the sesimanje imishini ezigugile, esikhundleni lemigqa zobuchwepheshe, ukuthuthukisa ukusebenza kwenye. amafa ezingokoqobo abalufundile noma ezidalwe kubhizinisi futhi okungezona OS, iya ku impahla yakho, ngaphandle uma ezisungulwe ngenye e inkontileka. amalungelo Exclusive imikhiqizo zomsebenzi bokusungula, okuyinto etholakala ngokuzikhandla concessionaire ngezindleko zayo phakathi kokusebenza kwesivumelwano yokunivumela, ngowenye inhlangano kuthengiselana. Izihloko Ungasetha futhi umthetho ezahlukene.
Izindleko ukuhlangabeza izibopho ngaphansi izinkontileka kukhona abasebenzisi impahla engokoqobo. Izivumelwano yokunivumela engxenyeni Russian le ndima ifakiwe, okusikisela ukuthi ingxenye kabusha / ukudalwa izindleko ngawuthatha umnikazi. Izindleko kumele kuleli cala icaciswe isimemezelo emncintiswaneni noma isinqumo ukusayinwa inkontileka (uma ithenda akuyona eyenziwa), kanye ngqo inkontileka.
Okuhambisa igunya umsebenzisi usebenze nokutholakala nezimpahla impahla ezinikezwe ngumnikazi, kuwumthwalo. Ngakho, kumele kubhaliswe ngokuhambisana nomthetho. Inqubo into wadala yesivumelwano Kwenziwa kanyekanye ne ukubhaliswa isimo ubunikazi grantor kule impahla.
Izigaba basuke bengabangane bengcebo
Umthetho unikeza uhlu lohlelo lokusebenza, ukudluliswa kwe-okungase kwenziwe ngaphandle njengoba isivumelwano yokunivumela. Izibonelo amafa eziphathekayo - izakhiwo ayingxenye:
Imigwaqo namanethiwekhi ingqalasizinda yezokuthutha kwezokuxhumana zobunjiniyela. Lesi sakamuva, phakathi kwezinye izinto, zihlanganisa underpasses, yokuwela, zokupaka, amabhuloho, imigudu nokunye.
Emfuleni nasolwandle izimbobo, kuhlanganise yabo imisele yamanzi, ubunjiniyela kanye nokukhiqiza sizinda.
Pipeline zokuthutha izindawo.
Izikhumulo zezindiza, izakhiwo lokubikezela, thatha-off futhi yokupaka, ezihambayo izindiza.
Ubunjiniyela ingqalasizinda yezimboni zezindiza.
Izindawo lokukhiqiza, ukusabalalisa ukudluliselwa ukushisa kanye nogesi.
ingqalasizinda Umfelandawonye izinhlelo.
Izinhloso imfundo, isiko, ezempilo, ezemidlalo, kanjalonjalo.
Metro kanye nezinye izithuthi zomphakathi.
Facilities for beqhuba yezokwelapha, ezokuvakasha, imisebenzi kanye ne-medical ukukhalima, inhlangano yokuzilibazisa.
Into yesivumelwano nenye impahla engekho nakunoma kamasipala / ubunikazi isimo, kungenzeka yenzelwe ukusetshenziswa njengendlela inhloso jikelele, ukuqhuba imisebenzi ebekiwe futhi unikeze yokukhiqiza inqubo olulodwa. Kulokhu, umnikazi unelungelo lokuthathwa njengomsulwa ngemvume umsebenzisi OS inkontileka civil esichaza izici wabo. Nokho, umnikazi kufanele uxhumanise ukuvela imisebenzi namalungelo kuyo ukuze ubudlelwano sivumelwano yokunivumela.
abahlanganyeli kule kuthengiselana
Umthetho uchaza ohlangothini elandelayo yesivumelwano yokunivumela:
Uhulumeni noma isigungu likahulumeni, isakhiwo uhulumeni zesifunda noma zendawo. Lezi zikhungo ukwenza njenge abanikazi (Grantors).
Usomabhizinisi ngamunye, angaphandle noma zasekhaya inkampani kwezohwebo noma izinhlangano ezimbili noma ngaphezulu zomthetho, esebenza ngokulandela isivumelwano ngokubambisana elula. Lezi zikhonzi kukhona concessionaires (abasebenzisi).
Lo mthetho uvumela ukushintshwa abantu kule kuthengiselana. It is owenziwa ukunikezelwa noma ukudluliselwa izikweletu kusukela kwemvume yomnikazi ngesikhathi bengena luhlobo ukusebenza kwesivumelwano. Umsebenzisi Ngeke ukwazi ukunikezela ngamalungelo ayo ngaphansi kuthengiselana njengoba izibambiso. Inguquko kwemisebenti umthamo zezomthetho concessionaire, inhlangano esemthethweni nge kabusha yayo enye inkampani eyayenziwa ngesikhathi inhlangano sekukhona ngaphansi izimfuneko ezishiwo isinqumo isiphelo sesimiso sivumelwano.
Ekunqumeni isikhathi isivumelwano yokunivumela maqondana into kamasipala zizosebenza, acabangele:
edingekayo Isikhathi ukudala / OS umsebenzi wokuvuselela izakhiwo.
Umqulu Investments ukuqaliswa imisebenzi okuvunyelwene amaqembu e kuthengiselana kwesikhathi payback.
izibopho Okunye ngaphansi umsebenzisi inkontileka.
Isivumelwano yesabelo somhlaba e maqondana into kamasipala icacisa Usayizi lemali ukuthi umsebenzisi liyadingeka uhlu ngesikhathi esaphila wathumela kuye ingcebo. Izinkokhelo ingafakwa lonke kwesikhathi esibekiwe, futhi ehlukile zinkathi. Inani Ukukhokhwa injalo, imithetho kanye nemigomo ye-kuthengiselana kunqunywa abahlanganyeli. Umthetho uhlinzekela izinketho eziningana for buyiselo izibopho zezimali:
Imali flat. Kungaba ikhokhwe ngesikhathi esisodwa noma ngezikhathi ezithile e kwesabelomali ezingeni okuhambisanayo yesikhwama.
I isabelo inzuzo noma imikhiqizo etholakale ngumsebenzisi ukuqaliswa imisebenzi bavumelana ngaphakathi kohlaka kuthengiselana.
Dlulisela amalungelo kontsendentu impahla okungewakho lo concessionaire.
Ababambe iqhaza kuthengiselana ingasungula amafomu okuxubile yokukhokha.
Isivumelwano yesabelo somhlaba e maqondana into kamasipala sisungula amathuba zomthetho ezilandelayo:
Ukuze sikhiphe noma iyiphi impahla eziphathekayo ngokuvumelana nemithetho kuchaziwe emthethweni yombuso kanye inkontileka.
Uhambisane nemigomo yesivumelwano yokunivumela ngokuqondile noma ngama-third party. Umsebenzisi izobophezeleka izenzo izinhlangano zama-third party Kepha yakhe.
Ukusetshenziswa kwe-imithetho kuchaziwe inkontileka, kuncike kule mibandela kuyimfihlo amalungelo akhethekile imikhiqizo umsebenzi bokusungula okukhiqizwa ngaphansi kwezimo yesivumelwano ngezindleko zayo, ukuze baqhube imisebenzi eyayifunwa amaqembu.
Ngo inqubo ukuqaliswa imisebenzi eyayifunwa sivumelwano yokunivumela, lo concessionaire kufanele:
Owawuzoba imigomo yokuqala kabusha noma ukudalwa kohlelo lokusebenza bese uqale ukusebenza kwawo.
Sebenzisa izimpahla eziphathekayo ngezinhloso futhi ngokuvumelana nemithetho kuchazwe kuthengiselana.
Ukuqhuba imisebenzi kuhlinzekelwe esivumelwaneni, hhayi ukumisa okwesikhashana noma avale ngaphandle kwemvume yomnikazi.
Ukuqinisekisa ukusebenza inkontileka ithuba ukuthola izinsizakalo, izimpahla kanye nemisebenzi kubasebenzisi.
Nikeza amakhasimende izinzuzo / ikhasimende umthetho kahulumeni kanye nezinye izimiso, kulezi zimo futhi ngokuvumelana nemithetho kuchazwe kule kuthengiselana.
Gcina ukuze ezinhle ezisebenza uhlelo, ukulungiswa kanye dolobha ukulungiswa ngezindleko zayo, ukuze athwale nezinye izindleko amafa eziphathekayo, ngaphandle uma echaziwe okuhlukile inkontileka.
Amaphuzu ayinhloko isivumelwano
Njengoba i yisigaba esibaluleke kuthengiselana ukhonza ukulungiswa isivumelwano yokunivumela. Ihilela nokudidiyela zonke amaphuzu enkulumo ayisihluthulelo sivumelwano. Ukulungiselela yesivumelwano yokunivumela kuhlanganisa, phakathi kokunye, kwencazelo ubukhulu kanye indlela yokukhokha for ukusebenza kwe-OS, imithetho owawuthi ke ziyokhokhwa. Isivumelwano, ngaphezu, izinto ezilandelayo kufanele khona:
izibopho Umsebenzisi ngaphansi kabusha ukudalwa olusebenzisayo, kuhambisana zokukhokha okuvunyelwene, ukukhishwa imisebenzi ebekiwe.
Ukwakheka kanye incazelo into. Kuleli qophelo, phakathi kwezinye izinto, izici lobuchwepheshe kanye nezomnotho yesistimu yokusebenza.
Imithetho yezwe ezizosetshenziselwa ukuqhuba umsebenzi esibekiwe, inkathi ngemvume isivumelwano / sublease (uma kunesidingo).
Inhloso kuphele isikhathi okusebenzela OS.
Okunye izimo ezifanele ebekwe umthetho kahulumeni.
Isivumelwano yokunivumela maqondana into kamasipala kungase kuhlanganise izinto:
amavolumu Production in the ukuziphatha elicacisiwe umsebenzi kuthengiselana.
Imithetho ukusungulwa ukulungiswa izimali (amanani) sokusebenzisa umsebenzi, imikhiqizo, izinsizakalo elihunyushwe, kanye nezibonelelo ukuze izindleko zokuphatha imisebenzi bavumelana.
Umqulu kokutshalwa kabusha / ukudalwa into yesivumelwano.
Ezinye izinto ezingenziwanga kungavunyelwa umthetho.
Umthetho usungula inqubo ethize isiphelo sesimiso sivumelwano yokunivumela. Wenziwe kohlaka mncintiswano. Document okulungiselelwe isifanekiso ehlanganisa izinto edingekayo abalwe ngenhla. Izichibiyelo isivumelwano yokunivumela enziwe kwemvume abawugijimayo. Kulokhu, izinto ukulungiswa njengoba kuchaziwe ngokuhambisana sipho ithenda kuyothathwa kuvunyelwe ezimweni ezehlukile ezibekwe ngumthetho. Ukushintsha sivumelwano kungenzeka futhi kwenziwe umyalelo wenkantolo ngezizathu elicacisiwe Code Civil.
ekunqanyulweni kwe inkontileka
Kuthatha indawo kulezi zimo ezilandelayo:
Phezu ukuqedwa, kumele ukuletha impahla kumnikazi, ngaphandle uma kungenjalo eyasungulwa inkontileka noma ngokomthetho. amafa ezingokoqobo ngesikhathi esifanayo kufanele ahlale esesimweni esinjalo ukuthi is ebalulwe inkontileka. Ukubuya impahla Kwenziwa yokubhaliswa isitifiketi yokudlulisa.
Ukunqanyulwa yesivumelwano ngumuntu isinqumo sokwahlulela
Ukunqanyulwa yesivumelwano ingase icelwe omunye amaqembu ebukhoneni ukwephula amaphuzu akhe ngomunye umhlanganyeli. Ngamanye izimo, futhi ingaba njengesihluthulelo elisekela. ukwephulwa Obalulekile imigomo yesivumelwano zihlanganisa:
Ukubambezeleka ekwakhiweni / ukudalwa OS.
Ukusebenza amafa eziphathekayo izinjongo zazo engamboziwe sivumelwano.
Ukwephula imithetho ukusetshenziswa OS.
Ukwahluleka concessionaire ukuqhuba amaqembu abavume umsebenzi kuthengiselana.
Ukumiswa noma ukwesulwa imisebenzi kubekiwe inkontileka.
Ukwehluleka noma ekugcwalisekeni engafanele nezibopho eziphathelene nokuhlinzekwa kwemisebenzi, izimpahla namasevisi abathengi.
Lapho siqhuba imisebenzi, bavumelana ukuthi amaqembu yesivumelwano, umsebenzisi ilungelo balwele amalungelo abo, ngokuhambisana nezimiselo zomthetho, izivumelwano zamazwe ngamazwe, imithetho yombuso kanye nezinye iziqondiso. Ikakhulukazi, bangathembela isinxephezelo nokulahlekelwa, esadaleka ngenxa yezenzo emthethweni zikahulumeni, zendawo iziphathimandla lesifunda kanye izikhulu zalezi zakhiwo. Abenzi bokubi kuphakama ngokuhambisana nomthetho ofanele.
Ukukhokhwa omgwaqo. Indlela hlola esihle enanini isinqumo?
Ngesivinini eseqile kwesivumelekile ngu km 20. ababeshayela ngejubane eleqile ovumelekile. Speeding: izinhlawulo
Vaz-2110 - Izici kanye nencazelo
Ukwelashwa kwesimiso sezinzwa
Kungenzeka ukuthi lesi sikebhe "Murena": incazelo kanye nokubuyekeza
Knockdown - lena ... Yini eyenza Knockout futhi knockdown
Imishini yokuwasha Kukalwe: umkhiqizo okuyinto inkampani ukukhetha?
Izimbangela, izimpawu kanye nokwelashwa hernias yomgogodla wesibeletho